Ku Saabsan Siyaasadda MDMA: Inaad Ka fikirto (Taang) Ama Aan Ka Fikirin (Taang) • Dawooyinka Inc.eu
Nederland - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talo Sharci) (tiirarka KHLA).
2 Dabaqa dhulka
3 Wadahadalka Daroogada
Sanadihii la soo dhaafay waxaan ku lug lahaa Ka fikir Tank MDMA Siyaasada. Aniga iyo 17 khubaro kale ah, waxaan baaray, anigoo ku saleynaya aqoonta sayniska ee la heli karo, taas oo xulashooyinka siyaasadeed ay gacan ka geysan karaan yareynta halista caafimaad ee la xiriirta isticmaalka MDMA iyo la dagaalanka dambiyada la xiriira wax soo saarka, qeybinta. iyo iibinta MDMA.
Intii lagu jiray seddex maalmood, waxaan kuqornay 95 xulashooyin siyaasadeed MDMA oo macquul ah 27 natiijooyin kaladuwan. Wadar ahaan waxaan ka fikirnay 2565 jeer saameynta ay soo bandhigidda tallaabo cayiman ku yeelanayso caafimaadka, dembiga, heerka isticmaalka, dhaawaca deegaanka, iwm.
Iyada oo ku saleysan layligan, dhammaan natiijooyinka ayaa markaa lagu tuuray isku-darka weyn. Hawshaasi waxay aakhirkii keentay qaab ku habboon. Qaab-dhismeedkan ugu habboon wuxuu diiradda saarayaa nidaaminta soo-saarka iyo soo-iibinta iyo iibinta MDMA, hubinta tayada, habka adag ee dembiyada iyo kormeerka isticmaalka. Ku-adeegsiga qaabka ugu wanaagsan wuxuu horseedi doonaa hoos u dhac ku yimaada dhaawaca caafimaadka, isticmaalka qofka isticmaala oo yaraada, dembiyada oo yaraada iyo waxyeellada deegaanka oo yaraata. Waxay sidoo kale keeni kartaa koror xadidan tirada dadka isticmaala MDMA.
Iyadoo la fiirinayo suurtagalnimada (siyaasadeed), Think Tank MDMA Policy waxay waxyar la qabsatay qaabka ugu wanaagsan kan loogu yeero Qaabka X-shop, taas oo leh natiijooyin faa'iido badan oo isku mid ah.
Wadarta dhibcaha (wadarta qiyaasaha miisaanka leh)
Toddobaadyadii la soo dhaafay warbaahinta lagama maarmaanka ah dareenka ku qaatay warbixinta iyo natiijooyinka. Nasiib darrose, waxaa kaloo jiray wada hadal kadib warbaahinta maxaa yeelay ururada qaar (Booliska Qaranka iyo Trimbos Institute) wey iska fogeeyeen baaritaanka. Haa, waxay ku darsadeen khabiir ahaan iyo maya, kuma ay raacin natiijooyinka warbixinta.
Anigu waxbadan iskama dhejin karo. Qaabka ayaa qayb ahaan loo abuuray iyada oo lagu mahadinayo talooyinkooda. Khibradeyda, iyo runtii inta badan khubarada kale, waxay ahayd in fikradahaas loo tixgeliyey kuwo qiimo leh intii lagu jiray maalmihii dhibcaha. Waxaan u arkaa wax aad ii dhiirrigeliya oo xiiso leh inaan la joogo hal qol oo ay joogaan dad wax ka yaqaan (xitaa) wax badan oo ku saabsan daroogada, balwadda, dembiyada iyo ka hortagga.
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin kooxdan khubarada ahi waxay ahaayeen kuwo aad u kala duwan, marka lagu daro wakiilo ka socda Booliska Qaranka, waxa ka mid ahaa dhakhtarka sunta sunta, cilmu-nafsiyaqaan, takhtar dawoole, aqoonyahan ku takhasusay cilmu-nafsiga, cilmu-nafsiga, garyaqaanka, cilmi-baarayaasha, saraakiisha ka-hortagga iyo khubaro kale. Dhamaan khubarada waxaa lagu casuumay aqoontooda shaqsiyeed iyo waaya aragnimadooda. Maaha jagadooda ama fikrad siyaasadeed oo gaar ah. Intii lagu gudajiray maalmihii dhibcaha, waxaa jiray qol fara badan oo lagu wada hadlo oo wadahadalku wuxuu kudhacay jawi wanaagsan, jawi wax dhisid leh iyadoo la ixtiraamayo midba midka kale aragtidiisa Qiyaasta badan ee qiimeyntu waxay gebi ahaanba ka dhigtay wax aan macquul aheyn in si xeeladeysan loo dhaliyo, iyadoo laga takhalusayo eex kasta ama "eexasho" qaabka laftiisa.
In Mr Daniel uu dareemay intaas ka dib inay tahay inuu iska fogeeyo natiijooyinka warbixin uu isagu isagu ku darsaday, waxaan u arkaa mid muhiim ah. Weligaa sida saxda ah kuma heli kartid sidan. Haddii aadan ku casuumin isaga, waxaa lagu eedeynayaa in booliska loo oggolaan waayey inay ka fekeraan. Haddii aad casuumaado, wuu diidi doonaa natiijada kasta oo uusan booliisku jeclayn. Sidaa darteed ma kala saari karo jawaabtiisa iyo xaqiiqda booliska (ke).
Ka fikir Qaanuunka Tanka MDMA (afb)
Waxa aniga aad ii dhibay ayaa ah inuu hayo xaqiiqooyin kale iyo eedeymo aan sal lahayn Hay'adda 'Think Tank' waxay isku dayeysaa inay sumcad-darro ku sameyso Siyaasadda MDMA iyada oo loo marayo warbaahinta iyo iyadoo bayaankeeda ay siinayso dhinacyada kale ee siyaasadeed meel bannaan si ay isaga indhatiraan natiijooyinka warbixinta.
Wasiir Grapperhaus sidoo kale wuu ku deg degay inuu ka digo taas Nederland qulqulka adduunka haddii aan sharciyeynno daroogooyinka adag. Taasi waa sababta, sanadaha soo socda, waa inaan sii mamnuucnaa xitaa in ka badan, inaan si ka sii adag u hawlgalno oo xitaa lacag badan ku bixino la dagaallanka daroogada. Haddii kale bulshada oo dhami way hoos geli doontaa. Dhacdo caan ah. Haddii maamulayaashu aysan haysan doodo wax ku ool ah, waxay had iyo jeer dib ugu laaban karaan beero abuur iyo cabsi gelin.
Waxaan jeclaan lahaa inaan u gudbiyo Mr. Grapperhaus iyo Booliska Qaranka xigmaddan soo socota ee Einstein: “Waallidu waxay sameysaa isla wax isku mid ah marar badan waxayna rajeyneysaa natiijo taa ka duwan. Haddii aad raadineyso natiijooyin kala duwan, ha sameynin markale wax la mid ah. ”
Mamnuuca ma shaqeynayo. Marba marka ka dambeysa dowladaha aqoonsan in dagaalka daroogada uu fashilmay. Mareykanka dhexdiisa, wadankii mar bilaabay dagaalka daroogada, sii soco gobolo badan u gudub sharciyeynta daroogada. Haatan waxaa sidoo kale si cilmiyaysan loo muujiyey in nidaaminta soo saarida iyo iibinta XTC ay horseedeyso hoos u dhac ku yimaada dhaawaca caafimaadka, isticmaalka qofka isticmaala oo yaraada, dembiyada oo yaraada iyo waxyeelada deegaanka oo yaraata.
Warbixinta 'Tank Tank MDMA Policy' waxaa loogu talagalay inay noqoto talaabada ugu horeysa ee lagu eego siyaasada daroogada si ka duwan sidii hore. Laakiin haddii Wasiirka Caddaaladda iyo Amniga iyo Booliska Qaranka aysan diyaar u ahayn inay dhageystaan ​​waxyaabo kale oo ay doorbidaan inay ku sii nagaadaan dhufeysyadooda, markaa waxba ma gaari doonno.
Natiijada waayo-aragnimadayda ee ku saabsan Think Tank MDMA Policy, waxaan horumariyay barxadda aniga iyo kaaliyaha borofisar Gjalt-Jorn Peters iyo la-taliye Willem Scholten Wadahadalka Daroogada aasaasay. Nooc ka mid ah iftiinka haanta fikirka, oo aan ku abuurno a wadahadal macquul ah ku saabsan siyaasadda daroogada. Wadahadal ku saleysan xaqiiqda halkii laga eegi lahaa. Madashu waxay xirxiraysaa dhammaan qiimeynta iyo doodaha iyadoo saldhiggaasina uu wadahadal la galayo dowladda hoose iyo tan qaran.
Bil kasta waxaan online ka dhignaa qiyaas cusub oo la xiriirta siyaasada daroogada ee haatan ka socota Nederland. Soo-booqdayaashu waxay ku qiimeyn karaan cabirkan iyadoo lagu saleynayo shan shuruudood: caafimaadka bulshada, dembiyada, dhaqaalaha, deegaanka iyo muuqaalka Nederland ee dibadda. Soo-booqdeyaasha ayaa markaa isbarbar dhigi kara ra'yigooda koox khubaro ah oo dib u eegi kara haddii loo baahdo. Qiyaasta bishan waa: Soosaarka iyo iibinta ecstasy waa in la nidaamiyaa. Ma rabtaa in qiimeyntaada la tiriyo? Kadib gasho Wadahadalka Daroogada oo nagu soo biir!
Netherlands - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talo Sharci) (@ KHLA2014). Sida ku xusan warbixinta sanadlaha ah ee 2019 ee Qaranka ...
Iibsiga xashiishadda sharciyeed badan ee British Columbia
Tan iyo markii dowladda federaalka Kanada ay sharciyeysay xashiishadda madadaalada dabayaaqadii 2018, nidaamka cusub ayaa la dhaleeceeyay maxaa yeelay ...